Ipalamente - Wikipedia
Ipalamente luhlobo lwaseburhulumenteni.
Ibhotwe lezindlu zepalamente yaseBritane, e-London
Eyona palamente yaziwayo yile yase-United Kingdom, le ithi ngamanye amaxesha ibizwe ngokuba ng"unozala wazo zonke iipalamente". igama elithi "palamente" livela kwigama lesiFrntshi elithi parlement, nelithetha intetho.
I-Althing, yipalamente yesizwe saseiceland, yaafunyanwa kwangoko ngeminyaka yoo-(930 AD), lilonke ke buburhulumente obudala kunabo bonke oorhulumente emhlabeni koorhulumente abasekhona. Nangona kunjalo, i-Althing ayizange isebenze njengorhulumente weenkulungwane ezine, kwaye umsebenzi wayo njengorhulumente wokuqala uphuculwe. 
Isebenza njani ipalamente yase-BritianeEdit
ipalamente yase-United Kingdom yahlukaniswe yangamacala amathathu epalamente, [[Indlu yee-Commons ze-House of Commons indlu engezantsi), eyee-lordss ( indlu engasentla) kunye ne-Monarch. Igunya loburhulumente ligxile kwindlu yowiso mthetho. Angama-650 amalungu ePalamente (MPs). Aba bantu bachongwe ngabantu be-United Kingdom ukuze babamele kwindlu yowiso mthetho. Inkokheli yombutho wezopolitiko efuna isininzi samalungu epalamente idla ngokuba ngumphathiswa oyintloko, kodwa kungabi yinkokheli yesizwe, esi sikhundla sibekelwe indlu yowiso mthetho. indlu yowiso mthetho ivula amatyala emali amaninzi, intsalela isuka kwindlu yezikumkani, zize zona zigqibe ngomyinge werhafu
↑ Jones, Clyve 2012. A short history of Parliament: England, Great Britain, the United Kingdom, Ireland and Scotland, p1; excerpt, "It is a commonly held misconception that the Westminster parliament is the 'mother of all parliaments' ... but the original phrase in 1865 was 'England is the mother or all parliaments'"
↑ "Assemby abolished" althingi.is 2011 retrieved 17 June 2012
↑ "Revival of the Althingi" althingi.is 2011 retrieved 17 June 2012
Last edited on 13 Eyo Mnga 2020, at 06:30
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-13 Eyo Mnga 2020, kwi-06:30